Docu-saabuun halkii aad ka heli lahayd: 48fps > Vielhuber David
Docu-saabuun halkii aad ka heli lahayd: 48fps12
Filimada badanaa waa la duubaa oo dib ayaa loogu dhejiyaa 24 wareega hal ilbiriqsi - laakiin qaabka ugu dhow ee 100 sano jir ah "24p" wuxuu umuuqdaa mid ruxaya. Si looga hortago dhibaatooyinka soo raaca ee aan fiicnayn (tusaale ahaan jajab xoog leh inta lagu jiro muraayadaha dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah) ee saadaalinta 24fps, shaqo ayaa la qabtay muddo dheer iyadoo la labanlaabayo heerka jir ilaa 48 loop halkii labaad iyo ka badan.
Waa in lakala soocaa labada kiis:
Filimada lagu duubo 24 wareeg hal ilbidhiqsi telefishankuna u rogo taxane ah 60 Hz. Tan waxaa lagu sameeyaa waxa loogu yeero xisaabinta sawir dhexdhexaad ah, iyada oo gacan laga helayo algorithms xisaabeed sawir isku dhafan ayaa loo xisaabiyaa inta udhaxeysa laba sawir oo asal ah. Nidaamkan waa laga demin karaa dhammaan telefishinnada.
Filimaanta si toos ah loo duubo iyadoo labanlaabaysa heerka jirku (48 wareegsan ilbidhiqsi) ka dibna dib loo ciyaaro; Tan waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, Peter Hobbit "The Hobbit". James Cameron, oo ah hormood aan ku ekeyn oo kaliya tikniyoolajiyadda filimada 3D, ayaa ka shaqeynaya xaddiga sare xitaa ee ah 60 wareeg ilbidhiqsigiiba: Avatar 2 waa inuu ku yimaadaa shaygan dhabta ah.
Labada xaaladoodba saameyn la yaab leh ayaa dhacda, waxa loogu yeero saabuun opera saameyn: Xitaa kuwa ugu qaalisan ee loo yaqaan 'blockbuster' ayaa u muuqda (ugu yaraan aniga ahaan) sida saabuun raqiis ah opera à la "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". La qabsan kari maayo laxanka qaaska ah gabi ahaanba: Waxay umuuqataa in sawirada ay raadinayaan nooc xiriir ah. Xaqiiqda muuqata ee la kasbaday waxay isu rogtay musiibo ku raaxeysiga filimka.
Waxaas oo dhan dabcan waa isha qofka wax arka - dadka qaarkiis xitaa ma ogaan doonaan saameynta ama xitaa way ka doorbidaan. Waa la arki doonaa haddii tikniyoolajiyaddan cusub ay ku guuleysan doonto hoolalka shineemooyinka iyo hor fadhiga guriga. Waxaan xiiseynayaa inaan arko sida aqlabiyada taageerayaasha filimku u aqbali doonaan horumarada cusub (sidoo kale marka loo eego 3D) iyo waxa mustaqbalku keeni doono.